eNasha.com - २९ वर्षदेखि उही कार्ड !
२९ वर्षदेखि उही कार्ड !
क्रिसमस आयो, यदि तपाइँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आफ्ना साथीहरुलाई क्रिसमस कार्ड दिनुहुँदो हो । नेपालमै पनि क्रिसमस कार्डको महत्व हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । खासगरी कलेज र स्कूलमा त क्रिसमस कार्ड दिनु त संस्कार नै बनिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा बेलायती एक जोडाका लागि क्रिसमसका अवसरमा कार्ड दिनु त झनै नौलो भएन । तर स्टेफन र ग्लिनिस वुल्नरको कुरा सुन्नु भयो भने पक्कै पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ ।
स्टेफन र ग्लिनिसले पहिलो पटक २९ वर्षअघि १९७८ मा यो कार्ड आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसपछिका दिनमा यिनीहरुले यही एउटा कार्डलाई थोरबहुत अक्षर र सजावट बदलेर एक अर्कालाई पठाउन थाले । त्यसो त यिनीहरुले एउटै कार्डलाई हरेक वर्ष पठाउँला भनेर सोचेका चाहिँ थिएनन् ।
शुरुका वर्षहरुमा यिनीहरुले यही एउटा कार्डलाई ठट्टाको रुपमा पठाएका थिए । यो क्रम तीन वर्षसम्म चल्यो तर त्यसपछि उनीहरुलाई बानी बसिसक्यो । अब नयाँ किनेर पठायो भने पनि आफ्नो माया कम भएको हो कि भन्ने भान नपरोस् भनी यही कार्डलाई थोरबहुत अक्षर र सजावटमा परिवर्तन गदै पठाउने गर्दछन् ।
"यस पटक चाहिँ पत्रकारहरुले चाल पाइहाले", गिल्निस उल्नरले बताइन् ।
त्यसो त पत्रकारले चाल पाउनुअघि घरका परिवारहरुले नै दिक्क माने । गिल्निसले द सन पत्रिकालाई भनिन्- "यस पटक साथीभाइहरुको जमघटमा यस पटक त्यही कार्ड देखेर भने- छ्या त्यै थोत्रो कार्ड ! भनेर गिज्याउन थाले । तर मलाई किनकिन यही मन पर्छ । यदि स्टेफनले मलाई नयाँ कार्ड ल्याएर दिएका भए म नयाँ लिन्न नै थिएँ ।"
माया हलिउड मूर्ख्याइँ मुद्दा मामिला उदारता गुगल भव्यता परिस्थिति उपाय इन्टरनेट बलिउड विज्ञापन प्रविधि कीर्तिमान सुन्दरी सेलेब्रिटी जनावर फट्याइँ नग्नता उदेकलाग्दो